Isku-Darka Intpo ee Isku-Darka Barafka ee Izmir | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirWareegga Wareega ee Barqashada Barafka ee Izmir
05 / 01 / 2019 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
tempo xoog leh
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, oo wax ka qabatay gobolada ay saameeyeen roobka barafka ilaa xalay fiidkii, ayaa ka feejigan kuwa barafka daadanaya iyo gaaska cusbo fidiya. Qeybaha sare ee magaalada, dhumucda barafka oo qiyaastii ah 50 cm. Waxay ka hortagtaa galaangalka xaafadaha qaar, halka kooxaha Magaaladu ay sii wadaan dadaalkooda ah inay furaan wadooyinka.
Kooxaha Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir sababtuna tahay barafka oo si xoogan waxtar ugu leh qeybaha sare ee Izmir, ayaa bilaabay shaqo adag si ay wadooyinka tuuladu u furnaadaan. Bilowga xilliga barafka, kooxaha Metropolitan, oo qaylo dhaan ka jiray ku dhawaad ​​1 bilood, waxay fureen waddooyinka xiran qaar ka mid ah magaalada iyadoo cusbo fidsan iyo gawaarida barafka daadanaya. Dowlada hoose ee magaalada, shaqada cusbada ee meelaha ay suurta gal tahay. Iyada oo wadooyinka ay xiran yihiin wax ka qabadka waxqabadka mar labaad loo furay isu socodka gaadiidka, kooxuhu waxay sii wadaan inay ka shaqeeyaan gobollada loo baahan yahay.
Xawaare xoog leh dagaalka ka dhanka ah barafka
Maaddaama dhumucda barafka uu gaadhay ilaa ugu yaraan 50 cm gobollada qaar shalay, Kooxaha Caasimadaha waxay caddeeyeen abaabulidda barafka, darajooyinka iyo baabuurta fidsan milixda. Haddii ay dhacdo koror baraf ah, gawaarida waaweyn iyo qalabka dhismaha heegan ayey ku jiraan. Bartamaha magaalada, degmada Kavacık iyo Tırazlı waxay gabi ahaanba fureen wadadii gaadiidka ee Degmada Yukarıada, Degmada Güneşli, Degmada Kırcalar iyo Degmada Topallar ee Bergama; shaqada cusbada ayaa sii socota. Intaa waxaa u dheer, barafka wax ku oolka ah ee Spil iyo Beşpınar, darajada wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo furitaanka wadada, halka gaariga cusbo sii faafaya uu sii wado cusbada aan kala joogsiga lahayn.
Ödemiş Hacıhasan, Kemer iyo Yılanlı Neighborhoods sababtoo ah culeyska sareeya ee taraafikada gawaarida looma ogola, kooxaha Izmir Metropolitan waxaa hogaaminaya gobolka iyagoo kaashanaya kooxdu.
Wareegtada mashquulka ah ee wadooyinka ciidanka
Dhiirigelinta Waddada ee Wadooyinka Ciidamada
Erzurum wuxuu ku yaalaa Tempo Travel
Warbixinta Maalintii ugu horeysay ee Izmir ee ku saabsan barafka
Imtixaanka barafka ee Izmir
Ku dhawaaqida qandaraaska: Mashruucyada iyo hindise-bixiyaha hindisada
Dagaalka barafka ee Izmir